Ufanele njani ukuba uthengise kwi-Intanethi | Martech Zone
Iindawo ze-Ecommerce zilandelayo, zibonelela ngebhokisi yesoftware njengeqonga lenkonzo elinonxibelelwano olomeleleyo- uninzi lwentlawulo ngokudityaniswa konxibelelwano kunye nentengiso ye-imeyile. Ukuba ufuna ukulawula ngakumbi isantya, ubhetyebhetye kunye nokwenza ngokwezifiso, ukubamba indawo yakho ye-ecommerce kunokuba yimpendulo. Kwaye ukuba unqwenela ukwakha eyakho, ungamantongomane nje.
Nalu ulonwabo kunye nobukrelekrele bokuphononongwa okujonga iindlela ezahlukeneyo zokuthengisa kuluhlu lwangoku lweesayithi ezikwi-intanethi.
umthombo:Isicwangciso seBhunga leCPC
tags: eCommercethengisa i intanethi
Jan 15, 2013 kwi-7: 59 AM
Ubunokuthini ukuba uphoswe ngu "Olx" kule infographic:/
Jan 15, 2013 kwi-9: 58 AM
Ndichithe ixesha elininzi ndihamba kwitshati yokuqukuqela yale infographic. Ndiyifumene ihlekisa ngokwenene kwaye, eneneni, kwindawo - ngokwenene. Umntu oyile le infographic ngokwenene unolwazi oluthile lwendlela yokuthengisa izinto kwi-Intanethi.